Wed, 2017-10-18 12:49
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ နှီးနှောဖလှယ်ရေး (Global UGRAD) ပညာသင်ဆုရ ကျောင်းသားများအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − U.S. Embassy Rangoon)
မြန်မာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား များ အမေရိကန်ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် တစ်နှစ်တက် ရောက်ခွင့် ပညာသင်ဆု
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်း မှ ကျောင်းသားများအတွက် အမေရိကန်အစိုးရကပေးသော ဘွဲ့ကြို တစ်နှစ် ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင် နှစ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘွဲ့ ကြိုကျောင်းသားများ နှီးနှော ဖလှယ်ရေး (Global Undergra-duate Exchange-Global UGRAD) အစီအစဉ်ဖြင့် ပေးအပ် သော ပညာသင်ဆုဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် အနည်းဆုံးပထမနှစ် တက်ရောက် ပြီးသူများသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိ သည်။ အခွင့်အလမ်းနည်းပါး သည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းမှ ကျောင်းသားများကို လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခေါင်း ဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့်တင် ရန်နဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် ပညာရေးဆိုင် ရာနှီးနှောဖလှယ်ရေး အတွေ့အကြုံတစ်ခုရရှိစေရန် အမေရိကန်အစိုးရက ပံ့ပိုးပေးမည့် အစီအစဉ် ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ဆုလျှောက်ထား သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်တစ် ခုခုတွင် တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရ မည်။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် Global UGRAD ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် ဖြင့် တစ်နှစ်တက်ရောက်ပြီးပါက မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားရမည် ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆုဖြင့် အမေ ရိကန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့်အ ခါ အနည်းဆုံး အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အ ချင်း သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် TOEFL ရမှတ် ၅၀၀ နှင့်အထက် ရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ ပညာသင်ယူ နေစဉ် တက်ကြွစွာပါဝင်သင်ယူလို စိတ်ရှိပြီး လူအများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်စွမ်း မြင့်မားရမည်။ မိမိ၏ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး ကို ကောင်းစွာပြသနိုင်ရမည့်အ ပြင် စာသင်ခန်းပြင်ပ လှုပ်ရှားမှု များတွင်လည်း ပါဝင်နိုင်ရမည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များတွင်သာ တက် ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပညာသင်ဆု ရရှိပါက ခရီးစရိတ်၊ ကျောင်းစရိတ်၊ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် အလုံးစုံကို ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
Global UGRAD ပညာသင်ဆုကို ယခုစတင်လျှောက်ထားနိုင် ပြီး လျှောက်လွှာပိတ်ရက်သည် ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ဖြစ်သည်။
https://mm.usembassy. gov/wp-content/uploads/ sites/41/Global-UGRAD-application-18-19.pdf တွင် လျှောက်လွှာကို ဒေါင်းလုတ်ရယူ ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက် လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက် စာတမ်းများ တင်ပြရမည်။ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို A4 အရွယ် အစားစာရွက်ဖြင့် တင်ပြရမည်။
- လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ တက္က သိုလ်တစ်ခုခု၌ တက်ရောက်နေ ကြောင်း ကျောင်းမှထုတ်ပေးသော ထောက်ခံချက် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်)
- ပထမနှစ် တက်ရောက်စဉ် ရရှိ ထားသော ဘာသာရပ်အလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်)
- တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)
- မိမိသင်ယူနေသော အထူးပြု ဘာသာရပ်ဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်ဦး၏ ပညာသင်ဆုရရှိသင့်သူ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် (အင်္ဂ လိပ်ဘာသာဖြင့်)
- မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရင်းနှီး သူတစ်ဦး၏ ပညာသင်ဆုရရှိသင့် ကြောင်း ထောက်ခံချက် (အင်္ဂ လိပ်ဘာသာဖြင့်)
လျှောက်လွှာနှင့် စာရွက်စာ တမ်းအားလုံးကို Rangoon USECA@state.gov သို့ သတ် မှတ်ရက်မကျော်မီ အီးမေးလ်ပေး ပို့နိုင်သကဲ့သို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ အ မှတ် (၁၁၀) ရှိ အမေရိကန်သံရုံး ယဉ်ကျေးမှုဌာန၊ လူထုဆက်ဆံ ရေးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
အသေးစိတ်ကို https://mm.usembassy.gov/educa tion/scholarship-programs/ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ DAAD ဒေသ ဆိုင်ရာရုံးတွင် ခြောက်လကြာ အ လုပ်သင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် ပညာသင်ဆု
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာ မြို့ရှိ DAAD (ဂျာမနီ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့) ဒေသဆိုင်ရာရုံးတွင် ခြောက်လကြာ အလုပ်သင်အဖြစ် သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အ ရေးဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် DAAD အဖွဲ့အစည်းက အာဆီယံဒေသတွင်း အဆင့်မြင့် ပညာရေးကဏ္ဍ မြင့်မားစေရေး SHARE ပရောဂျက်ကို ဆောင်ရွက်နေသည်။ ၂၀၁၅ မှ နောက်ပိုင်း နှစ်များအတွင်း အာဆီယံဒေသ တွင်း နိုင်ငံများအချင်းချင်း ပညာ ရေးဆိုင်ရာ ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ရှိလာစေရန်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ပညာရေးအရည်အသွေး တိုးတက်လာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်အထိ ထိုးဖောက်နိုင်စေ ရန် SHARE ပရောဂျက်က ဆောင်ရွက်နေသည်။
ထိုပရောဂျက်အတွင်းအလုပ်သင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် DAAD က ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ငန်းများ အကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ DAAD ဒေသဆိုင်ရာ ရုံးများနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံကာဆွေးနွေးသင်ယူခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အလုပ်သင်ပညာ ဆုရရှိပါက ဂျကာတာတွင် နေထိုင်စားသောက်စရိတ် အပြည့်အဝရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသူသည် အ နည်းဆုံး တက္ကသိုလ်တတိယနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဖြစ် ရန်လိုပြီး နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ စီးပွားရေး နှင့် လူထုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဘာ သာရပ်များ သင်ယူနေသူဖြစ်ပါက ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အပြော နှစ်ခုစလုံးကို ကျွမ်းကျင်ရမည်ဖြစ် ပြီး အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများ ၏ ဘာသာစကားတစ်ခုခု (သို့ မဟုတ်) ဂျာမန်ဘာသာစကားကို အနည်းငယ်လေ့လာသိရှိသူဖြစ်ရ မည်။ အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံ များ၏ ပညာရေးမူဝါဒများကို နား လည်ထားရမည်။ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုအားကောင်းပြီး အချိန်အတိ အကျအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများ mailto:gries@daadjkt.org သို့ အလုပ်သင်အဖြစ် ပါဝင်လုပ်ကိုင် လိုကြောင်း စာတစ်စောင်ရေးသား ကာ အီးမေးလ်ပေးပို့လျှောက်ထား နိုင်ပြီး အီးမေးလ် Subject နေရာ တွင် SHARE Intern (လျှောက် ထားသူ၏ အမည်)ဟု ရေးသားရ မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးလက်ခံ မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် အလုပ်သင်ကာလ စတင် မည်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်ကို https:// www.daad.id/en/2017/10/ 10/job-vacancy-intern-for-the-european-union-support-to-higher-educa tion-in-the-asean-region- project-share-at-the-daad- regional-office-jakarta/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံ ၁၈၀ ကျော်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရက ပေးအပ်သော Swiss Government Excellence Scholarships ဖြစ်သည်။ မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်အတွက် အဆိုပါ ပညာသင်ဆုကို လျှောက်ထားခွင့် ရှိသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ တက္က သိုလ်များတွင် တက်ရောက်မည့် သင်တန်းများသာ ပညာသင်ဆု ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆု အဖြစ် လစဉ်အသုံးစရိတ်၊ ကျူရှင် စရိတ်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ လေ ယာဉ်လက်မှတ် ကုန်ကျစရိတ်တို့ ကို ကျခံပေးမည့်အပြင် နေထိုင်ရေးစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ စက်တင်ဘာတွင် စတင်မည့် သင်တန်းများအတွက် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပညာ သင်ကာလ သုံးနှစ်အထိ ပညာ သင်ဆုပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Myanmar.zip.down load.zip/Myanmar.zip တွင် လျှောက်လွှာရယူနိုင်ပြီး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်မြို့နယ် ပြည် လမ်း၊ ခပေါင်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၁) ရှိ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးသို့ သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်ကို https:// www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/ home/bildung/scholarships- and-grants/swiss-govern ment-excellence-scholar ships-for-foreign-scholars-an. html#2146630976 တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။